NGAPHAKATHI NGAPHANDLE KWI-BBC1 KULE KRISIMESI-UPHONONONGO, ITREYILA KUNYE NEXESHA- IRADIO TIMES - IIMUVI
Ngaphakathi Ngaphandle uphononongo kunye netreyila
Ngaphakathi ngaphandle yenye yeefilimu zeDisney Pstrong zamva nje zokubetha izikrini zethu, kwaye lolunye usapho lwakudala lweKrisimesi 2019 kwiTV.
Ungena ngaphakathi kwiTV kule Krisimesi?
Ngaphakathi ngaphandle uku-BBC enye nge-3pm ngoMgqibelo wama-28 kuDisemba.
Ngaba ikhona into elungileyo? Unalo uphengululo?
UPstrong usenokuba ebengabonakali kwiminyaka emibini edlulileyo kodwa ngokuqinisekileyo khange baphume engqondweni. Ngobugcisa babo bamva nje, inkampani ethandwayo yoopopayi ihamba kwiziko lolawulo lobuchopho eRiley, intombazana eneminyaka eli-11 ethanda i-ice hockey ecaphukisa kukushenxiswa lusapho lwayo ukusuka eMinnesota yasemaphandleni ukuya eSan Francisco.
Ifilimu eyaqala ukhuphiswano kumnyhadala wefilimu wase-Cannes ukuya kwindumiso engathethekiyo-nokuba abagxeki abomeleleyo bayanyibilika xa bejamelene nophawu lwe-Cineaste-oluvunyiweyo lwe-Pstrong-kwaye sele beyifaka kwi-ofisi yebhokisi yase-US. Ikwayindlela entle yokuthathwa njengeyona nto iphambili kwisikali seWall-E, Ibali leToyi kunye noPhezulu. Kulula ukubona ukuba kutheni. Abaququzeleli beRonaldo Del Carmen kunye noPete Docter (ofumene umxholo osisiseko ngokujonga ubukhazikhazi bentombi yakhe) yenza lula ubunzima bokuqonda ngendlela ekulula ukuyiqonda.
Ukusebenza nzima ngaphakathi kwe-crani HQ kaRiley ziimvakalelo zakhe ezi-anthropomorphically: Uvuyo (luvakaliswe ziiPaki noLonwabo luka-Amy Poehler); Usizi (uPhyllis Smith); Uloyiko (uBill Hader); Umsindo (Lewis Black); kunye nokunyanyeka (uMindy Kaling, inkwenkwezi ye-E4's The Mindy Project). Umbono yipaki yomxholo ezele ukukhwela okonwabisayo kwasendle. Amaphupha enziwa kwisitudiyo sefilimu saseHollywood esiseduze - ibhloko yokubambisa ibhloko kukuba Ndiwa ixesha elide kakhulu emgodini. I-Subconscious yonke into imnyama kwaye isafobe esibi. Iimpawu zomlinganiso kaRiley kunye nezinto anomdla kuzo ziziqithi ezizimeleyo ekufuneka zigcinwe. Oololiwe beengcinga badibanisa umhlaba kunye, ngelixa iinkumbulo zakhe ziyimabhile, umbala uququzelelwa ngamanqanaba eemvakalelo ahambelana nawo: iimvakalelo ezimnyama, imeko yelanga, umona oluhlaza, njl.
Olu hlobo lukhazimlayo lwe-surreal luye lwasongelwa kakuhle lwaza lwangumxholo wobudala obuthile, apho iimvakalelo ezixubeneyo zikaRiley zinika iingcebiso kumfana kwaye zimnceda kwisiphithiphithi semihla ngemihla sokuziqhelanisa nobomi bakhe obutsha kwisixeko esikhulu njengoko wayenomdla ulangazelela ubomi bakhe bangaphambili. Lusuku lwakhe lokuqala kwisikolo esitsha esithimba zonke iimvakalelo ezijikelezayo kugxilwe kubukhali njengedabi phakathi kovuyo kunye nosizi ukukhupha iinkumbulo ezingundoqo kwiNgcinga yokulahla inkunkuma, kushiya ingqumbo, intiyo kunye noloyiko ukuthatha ulawulo kwaye kubangele ukuba uRiley acinge ukubaleka ekhaya.
Ukuchana ngokuchanekileyo kwedrama ebukhali kunye ne-pizzazz ebonakalayo ikwangumbane wokwenza izixhobo zerocket zokoqobo kukaDocter kunye noDel Carmen, ushukumisa ii-clichés zohlobo loopopayi olujolise kusapho kwaye ubayeka bawe kweyona ndawo intle. Uninzi luya kufumana imizuzu emihlanu yokuqala yokutshata ukuzalwa kukaRiley kunye namanyathelo omntwana kwiimvakalelo zakhe zangaphakathi ezichaphazela ngokulinganayo imontage ekuqaleni koPhezulu okanye iinkumbulo zokutya zomgxeki werestyu ezivela eRatatouille. Kukuphononongwa okuhambisanayo kwamava oluntu ekwabelwana ngawo ukuba imigodi yePstrong ngokugqibeleleyo; Ukubandakanya abantu abadala ngelixa abantwana babo behendwa ngumbono obonakalayo okanye umfanekiso oqaqambileyo weSuku-Glo. Izihloko ezihlala ziguquka kwiphephandaba lomsindo, ukusetyenziswa kwezitayile zoopopayi zexesha elidlulileyo (kwaneempembelelo zikaHayao Miyazaki zinokuvakala apha), i-blink-and-you-will-miss-it Hitchcock homages kunye nolungelelwaniso lokuvala oluqaqambileyo apho ezinye Ubuchopho babalinganiswa bangene ngaphakathi, bubungqina obaneleyo bokuba ingqalelo kaPstrong kwiinkcukacha ziya kuhlala zigcina istudiyo ngaphambi komdlalo.
Emva koko kukho uBing Bong (uRichard Kind), owayekade ethandwa ngumhlobo wakhe uRiley engazange acinge ngayo kwiminyaka. Ikhutshiwe ukusuka ekukhunjukeni kukaRiley ebuntwaneni, le icon yokudlala ithambileyo yenza ukuba okokugqibela, kwaye ichukumise ngokumangalisayo, idlale ukuthanda kwakhe kwirokethi yakhe enengoma, ngaphambi kokuyeka umzamo ebusweni bokungabi natyala kwakhe njengoko eqala kwangoku Indlela enkulu yokungena kummandla wolutsha. Uyabona, ukuze ubuyisele umtsalane kunye nokuphila kukaRiley, Usizi kufuneka luthathe inxaxheba enkulu kakhulu kwixesha elizayo. Kwaye wagqibela nini ukubona lo myalezo kwikhathuni?
Ngu-Pstrong kuphela onokwenza ezi ntlobo zeembono ezinamabhongo zisebenze kakuhle, kwaye benza njalo ngokudibanisa amabali anentsingiselo kunye namabali ahlukeneyo ngamahlaya anobukrelekrele kunye nexesha elininzi lokusuka entliziyweni. I-Pstrong ayinakho ukuba nelungelo lokushicilela ngokugqwesa koopopayi kodwa abaze basilele ukuyifumana indawo emnandi phakathi kobukrelekrele obunesitayile kunye nokulila, kunye ne-Inside Out lolunye uloyiso olukhulu kule meko icokisekileyo.
Ngaba ikhona itreyila?
I-GTA ekwi-Intanethi yokuhlaziya i-patch amanqaku: Umhla wokukhutshwa kweLos Santos Tuners uzisa utshintsho olukhulu
Umntu odumileyo we-SAS Ngubani onobuganga bokuphumelela uphononongo: UAnt Middleton akaboneleli ngonyango lukhethekileyo kuthotho olukhohlakeleyo ukuza kuthi ga ngoku
Ixesha leTempile 2 umhla wokukhutshwa | Umdlalo weqonga weSky, iyelenqe kunye neendaba zamva nje
intliziyo sussex breakfast show axed
indlela yokukhupha isikrufu eso sihlutyiweyo
owenza ingxelo karhulumente namhlanje
uthotho lwefilim imidlalo yendlala
I-Netflix ukumkanikazi wasezantsi
Umahluko ozimeleyo noxhomekeke kuwo
i-10 yeentsana ezixabisekileyo ze-beanie